सम्पूर्ण उपसुचकमा गिरावट आउँदा नेप्सेमा पहिरो, प्राविधिक बिश्लेषणले के देखायो ? - नेपालबहस
१४ साउन, काठमाडाैं । आज पनि बजारमा बिक्रीकर्ता हावी हुँदा नेप्से परिसूचक १ दशमलव ६१ प्रतिशतले घट्दै शेयरबजार बन्द भएको छ । नेप्से परिसूचक १४३१.५२ को विन्दुमा बन्द भएको छ ।
नेप्से परिसूचक २३ दशमलव ३६ अंकले घट्दा कारोवार रकम १ अर्ब ६८ करोड रहेको छ । कारोवार रकम भने वृद्धि भएको छ । बिक्रीकर्ताहरु केही आत्तिएको अवस्थामा देखिएका थिए । सम्पूर्ण उपसुचकमा गिरावट आएको र बजार दिनकै न्यून विन्दुमा बन्द भएको थियो ।
आज बजार १४५२.५२ को विन्दुमा खुलेकोमा बजारको उच्च विन्दु र खुला विन्दु एकै रहेको छ। बजार खुलेबाट नै निरन्तर घटेको थियो । आज बजारले २ बजेर ४७ मिनेटमा न्यून विन्दु समातेको थियो । आजको न्यून विन्दु १४३१ दशमवल ४७ थियो र बजार त्यही विन्दुकै वरीपरी बन्द भएको थियो । कारोवार रकम पनि वृद्धि हुनु र नेप्से परिसूचकपनि इण्ट्राडेलोमा बन्द हुनुलाई नकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ।
आज नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सर्वाधिक १५ करोड ७१ लाख बराबरको शेयर खरिदबिक्री भएको छ । युनियन हाईड्रोपावर र जोशी हाईड्रोपावरको शेयर मूल्य सर्वाधिक १० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। त्यस्तै जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्तको शेयर मूल्य सर्वाधिक ९ दशमलव ४५ प्रतिशतले घटेको छ।
आज सम्पूर्ण उपसुचकमा गिरावट आएको छ । बजारलाई ड्राईभ गर्ने वाणिज्य बैंक उपसुचकमा १ दशमवल ७३ प्रतिशतको गिरावट आएको छ भने सबै भन्दा धेरै होटल उपसुचकमा ३ दशमलव ६४ प्रतिशतको गिरावट आएको छ।
प्रतिरोध २ः १४५८ । प्रतिरोध १ः १४४४ । टेवा १ः १४२७ । टेवा २ः १४१७
👉 आजको कारोबारले बजारमा आपूर्ति बढेको देखिन्छ। आजको बजार प्रवृत्तिले बियरिस मैनबत्तीको चित्र बनाएको छ। यसले क्रेताभन्दा विक्रेताको चाप भएको जानकारी दिएको छ।
👉दैनिकी अवधिमा “आरएसआई” ५६ दशमलब ५८ को बिन्दुमा छ। यसको प्रवृत्तिले आज बजारमा आपूर्ति बढेको जानकारी दिएको छ ।
👉“एडीएक्स” र जोड / बिजोड “डाइरेक्सनल इन्डेक्स”हरुले बजारमा बिक्रेताको चाप केहि बढ्न थालेको जानकारी दिएको छ।
👉“अन ब्यालेन्स भल्यूम” ले पनि बजारमा आज विक्रेताको चाप रहेको जानकारी दिएको छ ।
👉 नेप्से बढेमा पहिलो प्रतिरोध १४४४ को क्षेत्रमा पाउने देखिन्छ र घटेमा पहिलो टेवा १४२७ को क्षेत्रमा पाउने देखिन्छ।
अन्तिम समयमा लगानीकर्ता सकारात्मक हुँदा प्राविधिक विश्लेषणले के देखायो ?
दोश्रो बजार १४०० माथि बस्न सफल ! टेवा, प्रतिरोध कहाँ ?
Previous articleसेमेष्टर भदौ तेस्रो र वार्षिक असोज पहिलो हप्तादेखि परीक्षा गर्ने तयारी
Next articleकोरोना मृत्तकको शव व्यवस्थापनमा सलंग्न १० सेनालाई कोरोना संक्रमण
आज रातीदेखि भारी बर्षाको सम्भावना